एकै नजरमा महिलाको के के कुरा हेर्छन् पुरुषले ? | www.aagopani.com Halloween Costume ideas 2015
काठमाडौँ / महिला र पुरुष एक सिक्काका दुई पाटा हुन् भनिन्छ । महिला बिना पुरुष र पुरुष बिना महिलाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यति निकट सम्बन्ध भएका यि जोडी मध्ये एउटी महिलाको कुन कुन कुरामा पुरुषले विशेष ध्यान दिन्छ त ? बेलायतमा गरिएको एक अध्ययनमा पुरुषले एकै नजरमा महिलाबाट मिठो एक मुस्कानको अपेक्षा गरेको हुन्छ । त्यो मुस्कानबाट नै लट्ठ हुने उसको महिलाहरूको स्वरलाई विशोष ध्यान दिएको हुन्छ । जवान उमेरमा प्रवेश गरेका युवतीको जवानी र प्रजनन स्वास्थ्यलाई थाहा पाउने विश्वसनीय आधार भएकाले पनि पुरुषहरु महिलाको आवाजमा लट्ठीने गर्छन् ।